EFT Hacks 🥇 Cheats၊ Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
မှန်ကန်သော cheat များကိုသင်ရရှိပါက Tarkov မှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Aimbot, ESP, Wall Hack နှင့် No Recoil တို့ကိုစစ်ဆေးပါ။
EFT Hack ကိုဝယ်ပြီးပြီလား။ ဒီမှာနောက်ခြေလှမ်းများကိုရှာပါ
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ EFT hacks များမ ၀ ယ်မီသင်ဝယ်ယူရန်သင်ရှာဖွေနေသည့် tool ကိုမကြာသေးမီကနောက်ဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ် online ဖြစ်နေကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နေစဉ်၊ အချို့သောအခြေအနေများတွင်အချိန်ဖြန့်ဝေမှုနှောင့်နှေးနေသည်။ များသောအားဖြင့်လက်ငင်းဖြစ်သော်လည်းနာရီအနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးသည် HWID သော့ခတ်ထားခြင်းခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည် - သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးနှင့်အဆင်ပြေကြောင်းသေချာပါစေ။ product product ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်အမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ရွေးချယ် EFT hack
ယ်ယူရန် EFT Hack in4ခြေလှမ်းများ
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော hack ကိုရွေးချယ်ပါ (EFT Aimbot, ESP, NoRecoil, etc)
ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံသောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များဖြင့်သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ပါ။ (Gamepron တွင်သာတွေ့နိုင်သောအထူးပရိုဆက်ဆာ)
သင်၏သော့ကိုရယူပြီး EFT Hacks များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
သင်၏ထုတ်ကုန်သော့ကို သုံး၍ cheat များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ EFT Hacks များသို့ဝင်ရောက်ပါ
ဘာကြောင့် Gamepron EFT Hack ခြင်းကိုသုံးသင့်သလဲ။
Escape From Tarkov ၏နောက်ဆုံး update သည်ဂိမ်း၏နောက်ဆုံးသုတ်နှင့် တွဲ၍ Killa ၏အစ်ကိုနှင့်စက်ရုံမှ scav သူဌေးဖြစ်သည့် Tagilla ကိုဂိမ်းထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။ ထိုမှတပါး၊ လက်နက်ကြာရှည်ခံမှုစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး၊ သင်၏လက်နက်သည်ယိုယွင်းပျက်ဆီးရန်အခွင့်အလမ်းကိုတိုးစေသည်။
Tarkov မှထွက်ပေါ်လာသောနောက်ဆုံးထွက်ရှိမှုနောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခြင်းသည်ကြီးမားသောအရာဖြစ်ပြီးအချိန်ကုန်လွန်စွာလှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရသည်။ ဂိမ်းတွင်သိသာထင်ရှားသည့်ပြောင်းလဲမှုများမှာ scavs ကြားအကြမ်းဖက်မှုကိုလျှော့ချရန်ရည်မှန်းထားသော scav ဂုဏ်သတင်းစနစ်ထပ်ဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားဖြည့်စွက်မှုများတွင်လက်နက်ချွတ်ယွင်းမှုများပါဝင်သည်။
Escape From Tarkov ကိုပုံမှန် update လုပ်နေတုန်း bug များနှင့်အခြားအသေးအဖွဲကိစ္စများကိုကူညီရန်အနေဖြင့်, ဂိမ်းသည်အဓိက update ကိုမမြင်ဘဲခဏကြာသွားသည်။ ကစားသမားများက BSG သည် Tarkov ၏ Streets of map ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်ခဲယဉ်းကြောင်းနှင့်အချို့သောကစားသမားများကမကြာမီအချိန်အတွင်းသုတ်ပစ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်ဟုဆိုကြသည်။
Tarkov မှ Escape သည်နှစ်မျိုးလုံးဂိမ်းကစားသူအသစ်များကိုရော၊ ဝါရင့်ကစားသမားများကိုပါအတူတကွပေါင်းစည်းစေသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူး၊ ဆိုလိုတာကတစ်ခါတစ်ရံမှာမင်းကမင်းကိုစိတ်ပျက်စေလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းတွေကပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုအားလုံးကိုဘာကြောင့်မုန်းတီးရတာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Escape မှ Tarkov Hack ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ EFT Aimbot သည်ကျွမ်းကျင်သောကစားသမားများကိုထုတ်ယူရန်အတွက်လိုအပ်သောကြောင့်သင်၏ mouse ကို နှိပ်၍ သတ်ဖြတ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Tarkov မှ Escape အတွင်းစီးနင်းမှုသို့ကျူးကျော် ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ဂိမ်း၏စက်ပြင်ပညာကိုသင်အချိန်များစွာကုန်လွန်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မလုံလောက်ပါ။ သင်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်စက်ရုပ်များကိုပင်သင်၏ဘ ၀ ကိုရှင်သန်နေသောငရဲဖြစ်လာစေရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောရမည်မှာသူတို့ကထိုအရာနှင့်အတူထူးကဲသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်။
အစွမ်းထက်သော“ Scavs” ကြောင့်သင်၏ဆံပင်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ဖြဲလိုလျှင်မလုံလောက်သကဲ့သို့၊ သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုရှုပ်ထွေးစေသည့်အစစ်အမှန်ကစားသမားများကိုလည်းစိုးရိမ်ရမည်။ အရိပ်ထဲတွင်ပုန်းနေသောကွန်ပျူတာရန်သူများ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ကိုထိုးဖောက်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောခြိမ်းခြောက်မှုမဟုတ်ပါ။ သင်အမှန်တကယ်ကစားသမားများကိုရောနှောခြင်းထဲသို့သွင်းသည့်အခါအခြားအလားအလာရှိသောဟက်ကာများနှင့် smurf အကောင့်များအသုံးပြုသူများကိုသင်စိုးရိမ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာအများစုကိုဖန်တီးထားသောအထူးပရိုဂရမ်မာများအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည် ဖြစ်၍ အကောင်းဆုံး EFT Hack ကိုသယ်ဆောင်ရန် Gamepron ကိုသင်အားထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် cheat များကိုမဖန်တီးပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်မည့်မိတ်ဖက်များနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည် - သူတို့သည်အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးထားသလောက်အာရုံစိုက်ကြသောကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင့်ဖြတ်များကိုမဖြတ်ပါ။ Aimbot, ESP, Wall Hack နှင့် NoRecoil ကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဤအရာသည်သင်စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများမှာလည်းလုံးဝရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသောကြောင့်သင် Gamepron မှပေးသော Tarkov ဟက်ကာများမှသင် Escape ကိုအသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်နှင့်အကာအကွယ်ပေးရန်သင်စီစဉ်ထားသည့်အကောင့်အားလုံးလုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုလုံခြုံအောင်ထားခြင်းသည်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချက်ချင်းပိတ်ပင်တော့မည်ဆိုပါကအဘယ်ကြောင့် hacking ကိုနှောင့်ယှက်ရမည်နည်း။ သင်ရရှိရန်သင်ကြိုးစားခဲ့သောတိုးတက်မှုအားလုံးကိုဟက်ကာများမှသိမ်းဆည်းထားရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်သူတို့၏ EFT cheat များထဲတွင်ဟက်ကာများအားလုံးရှာဖွေကြသည်။ Tarkov မှ Escape လောက၏ပြaနာဖြစ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Hacks ကိုရယူသုံးစွဲပါ။
EFT ကစားသမားအချက်အလက် ESP (အမည်၊ ကျန်းမာရေးအရက်ဆိုင်၊ အကွာအဝေး)
filter များနှင့်အတူ EFT Item ESP
EFT စူပါခုန် mode (activated သည့်အခါမျှကျဆုံးခြင်းပျက်စီးခြင်း) ။
EFT အရိုး & ရည်ရွယ်ချက် key ကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
EFT Recoil အစားထိုး
အကောင်းဆုံး EFT ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ
ရန်သူများကိုအစိုင်အခဲများနှင့်ကြည်လင်သောမျက်နှာပြင်များမှတဆင့်ရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Tarkov Player ESP မှ Escape ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်၏တိုက်ခိုက်မှုကို Gamepron သုံးပြီးတိကျစွာစီစဉ်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သည့်အခြားအချက်တစ်ခုမှာ Player Information ESP ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသူတို့၏အမည်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သူတို့ရရှိသောကျန်းမာရေးနှင့်အကွာအဝေးကိုပင်ကြည့်နိုင်သည်။
Tarkov Item ESP မှ Escape from Filters ပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ သင်၏အချိန်ဖြုန်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးကောင်းသောပစ္စည်းများကိုရှာဖွေခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။
အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Tarkov ကနေ Escape ကခက်ခဲတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် EFT Aimbot ကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေပဲရှိပါသေးတယ်။
EFT ကျည်ဆံလမ်းကြောင်း (အကွာအဝေးနှင့်အလယ်အလတ်တွင်ထိရောက်သည်)
Escape မှ Tarkov မှသင်၏ကျည်ဆံများ၏တည်နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Bullet Track အင်္ဂါရပ်အားဖွင့်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရန်သူကသင့်ကိုရည်ရွယ်သည့်အခါ (သို့မဟုတ်သင်၏ဇာတ်ကောင်နှင့်နီးစပ်သော) အခါတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုသည်သင်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပြလိမ့်မည်။
EFT စူပါခုန် mode (မဖွင့်ပါကပျက်စီးခြင်းမရှိ)
Gamepron နှင့်ဂယက်ရိုက်မှုမရှိဘဲရယ်စရာကောင်းသောအမြင့်မှကျပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Hack တွင် Super Jump Mode ပါ ၀ င်ပြီးအမြင့်မခွဲခြားဘဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
EFT အရိုး & ရည်ရွယ်ချက် key ကိုပြုပြင်နိုင်သည်
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအလုပ်လုပ်ရန် Tarkov Aimbot မှကျွန်ုပ်တို့၏ Escape ကို Adjust! Bone ဦး စားပေးမှုနှင့်အခြားပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ Gamepron တွင်သင်အောင်မြင်ရန်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။
EFT မြင်နိုင်စစ်ဆေးမှုများ aimbot
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Tarkov Aimbot မှ Escape ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်၏ပစ်မှတ်များကိုထိ မိ၍ သတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည့် Visible Checks အင်္ဂါရပ်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
Escape မှ Tarkov မှရရှိသောမကောင်းသောအကြံအစည်များမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သော်လည်း Recoil Compensator ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Planet တွင်အကောင်းဆုံး EFT Player ဖြစ်လာသည်
ဒီဂိမ်းကအရမ်းခက်ခဲတယ်၊ ဒါကြောင့် Tarkov ရဲ့ cheat from ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော Escape ကိုအသုံးမပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်အပေါ်ပိုပြီးတင်းကျပ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးသည်လုံးဝမတွေ့ရသေးသောကြောင့်များစွာသောပွဲများကိုနိုင်အောင်သင်ကူညီလိမ့်မည်။ Tarkov မှ Escape ကစားသောအခါယောက်ျားများကြားရှိနတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်သည်ဟုခံစားရသည့်ခံစားမှုကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားလိုပါက Gamepron မှဖြေရှင်းနိုင်သည်။
Tarkov Hack and Cheat မှလူကြိုက်များသောထွက်ပေါက်
Tarkov Aimbot မှထွက်ပြေးပါ
Tarkov ESP နှင့် Wallhack မှထွက်ပြေးပါ
Tarkov Hack and Cheat မှအခြားထွက်ပေါက်
သင်ဝယ်ယူနိုင်သော Tarkov Hacks မှအကောင်းဆုံး Escape ကိုရယူရန်သင်ရှာဖွေနေပါသလား။ အွန်လိုင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့အခမဲ့ tools တွေကိုသူတို့ရဲ့ကတိတော်တွေအတိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Tarkov Hack မှ Escape တွင်တွေ့ရှိရသောလူကြိုက်အများဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုသင်အလိုရှိပါက Gamepron သည်သင်ရေတွက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည် - ၎င်းသည်ဘက်လိုက်ဟန်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုသုံးစွဲသူများမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်သူတို့အတွက်သာဖြစ်သည်။ hack တစ်ခုအနေဖြင့်တိုးတက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ hack များ၏အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်သင်သိပြီးဖြစ်သည်။ Tarkov Aimbot, ESP, Wall Hack, NoRecoil နှင့် Footprints တို့၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အတိုက်အခံကိုဖယ်ရှားရန်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။
သင်၏ဖျော်ဖြေရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်တန်ပြီ။ သင်တစ်ကိုယ်တော်ကစားသမားဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားခြင်းတွင်ပျော်မွေ့သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Hack ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းစေလိမ့်မည်။
ချစ်ပ်များကျဆင်းသွားပြီးသင်၏အသင်းရှိလူအားလုံးသေဆုံးသောအခါသင်၏ရည်မှန်းချက်မှာတာကော့မှ Escape ကဲ့သို့သောဂိမ်းတစ်ခုတွင်သင်ရေတွက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာရှိသည်။ ဒီဂိမ်းမှာသင့်မှာရည်မှန်းချက်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်မင်းမှာအချိန်မကောင်းတော့မှာပေါ့၊ ဒါကသူတို့ကဂိမ်းကိုဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာအလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့ရူပဗေဒအင်ဂျင်ကိုသုံးထားလို့ပဲ။ “ စိတ်ကူးယဉ်သေနတ်သမား” ကစားသည့်အခါသင်တဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားသွားပြီးသေနတ်သံများသည်ပြင်းထန်ပြီးတိုတောင်းလှသည်။
ကစားသမားများကိုမြေပုံတစ်လျှောက်မြှပ်နှံထားသည့်အတွက်များသောအားဖြင့်သင့်အားအသက်ဆက်ရှင်နိုင်ရန်သင်၏လက်နက်များကိုအားမထားနိုင်ပါ။ လူတိုင်းသည်လက်ကိုလုယူလိုကြသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Aimbot ကိုအရိုး ဦး စားပေးစနစ်နှင့် Auto-Aim / Fire သုံးခြင်းကသင့်အားပိုမိုမြန်ဆန်သော (နှင့်ငြိမ်သက်မှုမရှိ) စေလိမ့်မည်။ ရန်သူတွေကသင့်ကိုနှေးကွေးစေဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က Instant Kill ကို enable လုပ်ပြီးသင့် mouse ကိုတစ်ချက်ကလစ်နှိပ်ပြီးပြိုလဲသွားတာကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
လက်ျာဘက် Tarkov ESPP မှ Escape သည်ရန်သူတည်နေရာကိုပြရုံသာမကသင်၏တိုက်ခိုက်မှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာစီစဉ်နိုင်သည့်ရန်သူအချက်အလက်များကိုလည်းသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ရန်သူသည်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိပြီးအစိုင်အခဲများနှင့်မမြင်သာသောမျက်နှာပြင်များမှတဆင့်မြင်နိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့၏အမည်၊ အဘယ်ကျန်းမာရေး၊ မည်မျှအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်တို့ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ Tarkov ESP နှင့် Wall Hack မှ Escape မှဤအင်္ဂါရပ်များကိုမကြာခဏအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ Gamepron ရှိစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မကြောက်ပါ!
သင်ဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်အတွင်းအကောင်းဆုံးလုယက်မှုအားလုံးပုန်းခိုနေသည့်နေရာကိုရှာဖွေရန် Item ESP ပါ ၀ င်သောစစ်ထုတ်ကိရိယာများကို သုံး၍လည်း သုံးနိုင်သည်။ သင်၏ Escape from Tarkov ESP ကိုအသုံးပြုသောအခါအမှိုက်ပုံးကိုရယူခြင်းသည်အတိတ်ကာလဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးသောသေနတ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်နေရာများ၌ပင်မီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည်။ သငျသညျပိုမိုထိရောက်သောလုယက်သူသို့မဟုတ် fragger ဖြစ်လိုသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ EFT ESP နှင့် Wall Hack ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်၏ရန်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခြေရာအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလုယူပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုကျော်သွားပြီဒါမှမဟုတ်မင်းကိုလွန်သွားအောင်လုပ်ခဲ့ရင် Footprints feature ကိုသူတို့ဘယ်သွားသွားမှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ရန်သူဆီတိုက်ရိုက်သွားစေမယ့်ခြေရာခံလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက“ High Damage” mode ကိုဖွင့်ပြီးသူတို့ကို raid ကနေအမြဲတမ်းဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ သင်လိုချင်သည့်မည်သည့်လက်နက်ကိုမဆိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက် ပို၍ ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည့်အပြင်သင်ပါဝင်ဆင်နွှဲသည့်မည်သည့်သေနတ်သမားမဆိုသင့်အားအစွမ်းကုန်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Distance Hack သည်သင်ခြေရာကိုလိုက်လျှောက်သောအခါသင်မည်မျှနီးကပ်သည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်လိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးအရာကသင်ခြေရာခံနေတဲ့ရန်သူကိုအံ့အားသင့်စေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Hack ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည်။ ထို့အပြင်သင်သည်အခြားသူချင်းဟက်ကာများနှင့်ဆန့်ကျင်နေလျှင်ပင်သင်၌သာလွန်ကောင်းမွန်သည့်ကိရိယာရှိလိမ့်မည် (ရလဒ်အနေဖြင့်ထိပ်ဆုံးမှထွက်ပါ!) ။
သင့်တွင် Scavs နှင့်စစ်မှန်သောကစားသမားနှစ် ဦး စလုံးအားဖယ်ရှားပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမည့် Tarkov Hack မှကျွန်ုပ်တို့၏ Escape ထဲတွင်အမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်ပြောခဲ့သည့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို EFT Hack တွင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သော်လည်းအစမျှသာရှိသေးသည်။ သင်၏အကောင့်များအားလုံးကိုလုံခြုံစေရန် 2D Radar နှင့် stellar anti-cheat protection တို့ပါဝင်သည်။ Escape မှ Tarkov မှအသုံးပြုသောအလိုအလျောက် cheat detect လုပ်ခြင်းစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ အကြောင်းမှာမည်သည့်အကျိုးဆက်များကိုမျှမခံစားရစေဘဲသင့်အားလိမ်လည်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ NoRecoil လုပ်ဆောင်ချက်သည်အခြားလူကြိုက်များသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ တာကော့မှ Escape သည်လက်များရှိသောသူတို့အားဆုချလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏ရိုက်ချက်များ၏ ၁၀၀% ကိုသင်ချနိုင်လျှင်၊ တစ်ဒါဇင်လောက်သာစီးနင်းမှုတစ်ခုတွင်သင်မည်မျှအထိတိုးတက်နိုင်မည်ကိုမပြောနိုင်ပါ။ Tarkov မှ Escape တွင်ကြိတ်ခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေလိုလျှင်တိုးတက်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။
EFT Hacks များ မေးခွန်းလွှာ
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EFT Hacks
ကျွန်ုပ်တို့၏ Tarkov Hack မှကျွန်ုပ်တို့၏ထွက်ပေါက်သည်ရိုးရာလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမည်မဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောကိရိယာများမှအရည်အသွေးများစွာကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Hack အတွင်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောအင်္ဂါရပ်များကိုအခြားမည်သည့်နေရာတွင်မျှရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ အခြား hack provider များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍ သီးသန့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သင်နှစ် ဦး စလုံးထိထိရောက်ရောက်နှင့်လုံလုံခြုံခြုံလိမ်လည်လှည့်စားလိုပါက Gamepron သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EFT Aimbot
ကျွန်ုပ်တို့၏ Esark from Tarkov Aimbot ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးသောနေရာမှ headshot ကိုသင် pin-point မှတ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်ပျက်စီးမှုမှမပါဘဲရန်သူများကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ EFT Aimbot သည်သင်တို့အတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်များကိုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ သင့်အားထိုင်ခုံထိုင်။ အနားယူရန်ခွင့်ပြုသည် - လုယက်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်းများကိုစုဆောင်းခြင်းသည်ရန်သူများထံမှမည်သည့်အခါမျှထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EFT ESP
ကျွန်ုပ်တို့၏ Escape from Tarkov ESP ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အားရန်သူများထက်မကအရေးကြီးသောအရာအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေလိမ့်မည်။ ကစားသမားအရိုးစုများကိုအစိုင်အခဲ / မရှင်းလင်းသောမျက်နှာပြင်များမှသင်မြင်နိုင်သည်၊ သို့သော် ESP အမျိုးအစားများ၊ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ESP၊ ကစားသမားအမည်များနှင့်၎င်းတို့၏အကွာအဝေးများကိုလည်းသင်မြင်နိုင်သည်။ EFT ESP နှင့်သင်သေချာပေါက်သိမှာဖြစ်သကဲ့သို့ရန်သူသည်အနီးအနားတွင်ရှိသည်ဟုသင်ယူဆစရာမလိုပါ
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EFT Wallhack
Tarkov မှ Escape သည်စိုးရိမ်စရာကောင်းသောထောင့်အမြောက်အမြားရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Wall Hack သည်သင့်ချွေးများကိုမငြိမ်းစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အဓိကအချက်များနှင့်ပြိုင်ဘက်များမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသင်အမြဲတမ်းသိလိမ့်မည်၊ သင်ဆန္ဒရှိသည့်နံရံများကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကင်းထိုးခြင်းနှင့်ထောင်ချောက်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်ခက်ခဲသောအလုပ်မဟုတ်တော့ပါ။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EFT Norecoil
တိကျမှုသည်သေနတ်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအနိုင်ရခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် NoRecoil အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်လုံးဝဖယ်ရှားပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့်ပမာဏ၏ပမာဏမှာလက်နက်မှသည်လက်နက်တစ်ခုအထိကွဲပြားလိမ့်မည်။ သို့သော် NoRecoil လုပ်ဆောင်ချက်အားဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်မည်သည့်ရွေးချယ်မှုပင်ဖြစ်ပါစေသင်စိတ်ပူစရာမလိုပေ။
အကောင်းဆုံး EFT hack ခြင်းကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုလုံခြုံစိတ်ချပြီးပါကသင်၏ EFT Hack ကိုချက်ချင်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည့်အတွက် (slot အပေါက်ရှိနိုင်သောကြောင့်) ကျွန်ုပ်တို့သည် downloading လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ သင် download လုပ်ရန် slot ကိုဖွင့်ရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်အရှည်ဆုံးသည် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီအထိဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်သင် cheats များကို ၀ ယ်ပြီးနောက်ချက်ချင်း download နိုင်သည်။
သင်၏ EFT hacks များသည်အခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ စျေးကြီးရသနည်း
ငါတို့ Tarkov Hack မှ Escape နှင့် ပတ်သတ်၍ အတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ Gamepron ၌ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပုံနည်းနည်းသာဖြစ်သည်။ သင်ဝယ်ယူသည့်အခြားအရာများကဲ့သို့ပင်သင်သည်အရည်အသွေးအတွက်ပေးဆပ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ EFT Hack ကိုတစ်ချိန်တည်းလူအချို့အတွက်သာကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၁၀၀% မတွေ့ရှိရသည့်အပြင်စျေးနှုန်းလည်းမမြင့်မားပါ။
သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာ hack ဖို့စီစဉ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးအချိန်ရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နေ့စဉ်, အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုထုတ်ကုန်သော့ကိုရောင်းနိုင်ပါတယ်; သင်နည်းနည်းလောက်ဟက်ကာလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ အချိန်အကြာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် Gamepron သည်အွန်လိုင်း Tarkov Hacks မှအကောင်းဆုံး Escape ကိုရယူရန်ကူညီနိုင်သည်။ တခြားနေရာကိုကြည့်စရာမလိုဘူး!
Awesome ကို EFT ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ